Wafdi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dastuurka oo maanta gaaray magaalada Garoowe (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Wafdi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dastuurka oo maanta gaaray magaalada Garoowe (SAWIRO)
Wafdi uu hoggaaminayay wasiirka arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane C/raxmaan Xoosh Jibriil ayaa maanta gaaray magaalada Garoowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland.
Wafdiga wasiir C/raxmaan Xoosh Jibriil waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe kusoo dhaweeyay xubno ka tirsan aqalka sare, wasiirka arrimaha dastuurka ee Puntland Mudane Cali Siciid Oogle iyo mas’uuliyiin kale.
Shirkaasi ayaa uljeedkiisu yahay in madaxda iyo shacabka maamulka Puntland lala yeesho wadatashi ku saabsan hannaanka dib u eegista dastuurka.
Wafdiga wasiir C/raxmaan Xoosh Jibriil ayaa markii dambe loo galbiyay xarunta madaxtooyadda maamulka Puntland, iyagoo salaan ugu tagay madaxweyne C/weli Maxamed Cali Gaas.
Wasiir C/raxmaan Xoosh Jibriil oo la hadlay warbaahinta ayaa uga mahad-celiyay madaxda Puntland sida diiran ee ay u soo dhaweeyeen wafdigiisa isaga oo sheegay in kulamo wadatashi ah la qaadan doonaan dhamaan qeybaha kala duwan ee bulshada.
Ugu dambeyntii, wasiir C/raxmaan Xoosh Jibriil ayaa sheegay in wasaaradu ay si rasmi ah maanta u bilawday safaro ay ku tagi doonaan dhamaan maamul goboleedyada dalka ka jiro, si ay madaxda iyo shacabka uga la tashtaan qorshaha guud ee hannaanka dib u eegista dastuurka oo ay wasaaradda diyaarisay.